Sariir badan oo dhalmada umulaha ah B-45
B-45 Sariirta-badan ee dhalmada-dhalmada Cabbirka: 1800 (L) × 600 (W) × 650/895 (H) mm Miisooyin badan oo uurreyda iyo umulaha ah ayaa loogu talagalay dhalmada, ilmo iska soo rididda iyo baaritaanka cudurada dumarka. Waxaa lagu gartaa hawlgal fudud, dhaqaale, badbaado iyo isku hallayn. Waxay ka kooban tahay sariir dusha sare, gogosha sariirta iyo salka sariirta. Dusha sariirta waxaa ku jira qaybta dambe, qaybta kursiga iyo qaybta lugta. Dhaqdhaqaaqa kor-u-kaca ee qaybta dambe iyo gadaal iyo gadaal qulqulka sariirta dusha waxaa xakameynaya giraan gacmeedka, oo sameeya ...
Dharka uurka ku jira ee loo yaqaan 'Epoxy Coating' ee sariirta uurka B-43-1
Cabbirka: 1680mm (L) * 620mm (W) * 800mm (H) Astaamaha ugu muhiimsan: 1. Xirmooyinka isku-dhafka ah, joodariga polyurethane oo tayo sare leh; 2.Shreex qaybood, nasasho dhab ah (oo lagu hagaajiyay guga gaaska), shaqada nasashada jilibka (oo ay maamusho nidaamka makaanikada); 3. Qalab laba jibaaranaya oo taageera, oo leh hal weel SS oo miiska hoostiisa ku yaal 4. Saldhig lugo lug ah, cag leh caag dhawaqa ka hortagga ah 5. Dhisidda alaabada gawaarida ku soo badisa.
Sariirta birta ah ee bir la'aanta ah B-42-1
cabirka: 1680mm (L) * 600mm (W) * 800mm (H) Muuqaalka ugu weyn: 1. Xargaha bir-birta ah, joodariga polyurethane oo tayo sare leh; 2. Saddex qaybood, nasasho dambe (oo lagu hagaajiyay guga gaaska), shaqada nasashada jilibka (oo ay maamusho nidaamka makaanikada); 3. Qalab laba jibaaranaya oo taageera, oo leh hal weel SS oo miiska hoostiisa ku yaal 4. Saldhig lugo lug ah, cag leh caag dhawaqa ka hortagga ah 5. Dhisidda alaabada gawaarida ku soo badisa.
Tuubbo wasakhaysan oo bir wasakh ah
Qalabka tuubada wasakhaysan ee birta wasakhaysan F-30 Cabbirka: 290mm (D) * 420mm (H) Muuqaalka ugu weyn: 1. Dhismaha bir aan fiicnayn oo leh tuubbo caag ah oo dusha sare ah; 2. salka leh tuubbooyinka fadhiga1.1mmmm 3. Weelka caagga ah waxaa loo beddeli karaa bir daxalan markii la codsado. Fadlan xasuusnow inaad nala soo xiriirto sicirka oo isbeddeladan awgeed.
bir bir-la’aanta ah oo loogu tala galay M-4
birta birta ah ee bir-birta ah ee loogu talagalay M-4 muuqaalka ugu weyn: 1. Tuubbo bir ah oo bir-bireed aan kala badnayn 2. dusha sare oo leh 4 qabsiyo ah
Istaagga IV (nooca C)
IV istaaga (nooca C) Muuqaalka ugu weyn: 1. Tuubbo bir ah oo bir-gburugburu ah iyo saldhigga caagga ah ee ABS; 2. dhererka waa la hagaajin karaa laga bilaabo 135cm illaa 240cm; 3. dusha sare oo leh 4 qabsiyo ah qalabka loo yaqaan 'chrome', jaangooyaha caagga ah ee ABS oo leh dabeedyada
Kursiga kuraasta F-44-2
Cabbirka: L1900 * W530 * H240 / 400mm muuqaalka ugu weyn: 1. Xirmooyin isku-dhafan oo leh bir qafiif ah, sare leh isbuunyo tayo sare leh oo leh maqaar maqaar dabiici ah 2. saldhig oo ay kujiraan jawaanno 3. sheygan waxaa loo isticmaali karaa kursi iyo sariir labadaba